Besulwe izinyembezi bexhaswa ngo-R9m - Ilanga News
Home Izindaba Besulwe izinyembezi bexhaswa ngo-R9m
Besulwe izinyembezi bexhaswa ngo-R9m
Inhloso wukuthuthukisa osomabhizinisi abasafufusa
UNKK Lungile Makhathini womfela-ndawonye obizwa ngamaTshitshi oQobo ehamba noNkk Bongi Sithole-Moloi ongungqo-ngqoshe wezolimo KwaZulu-Natal, noMnu Khanyisani Shandu ongusihlalo we-Enterprise Ilembe bebuka izinkukhu zalo
mfelandawonye oxhaswe wumnyango ngo-R9 million.
ZESULIWE izinyembezi kumfelandawonye wabesifazane baseMhlali ngaphansi kukaMasipala waKwaDukuza, bethola uxhaso luka-R9 million eMnyangweni wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya KwaZulu-Natal oholwa nguNkk Bongi Sithole-Moloi ongungqongqoshe emcimbini obukule ndawo ngoLwesihlanu.
Laba besifazane abawu-5, abazibiza ngamaTshitshi oQobo, bakhelwe yilo mnyango obhazabhaza bamahhoko amabili lilinye ligcina izinkukhu zamaqanda eziwu-5 000 – anezindawo lapho izinkukhu zihlala khona zibeke amaqanda nendawo yokuthi zidle, enamanzi.
Baxhaswe nangezinkukhu eziwu-5 000. Ekhuluma neLANGA uNkk Lungile Makhathini ongelinye lamaTshitshi oQobo, uthe ukuthola lolu xhaso kubona kufana nokwesulwa izinyembezi ngoba kade baqala bezama ukwenza izinto kodwa kungalungi.
“Siqale sazama ukuthunga kwangalunga, sazama ukuthunga izimfonyo nakho kwangahamba kahle, kanti uJehova ubesasihlelela umsebenzi ongaka. Lo msebenzi siwuqale ngonyaka odlule, sacela uxhaso njengoba sesiluthola nje.
“Sibonga kakhulu kungqongqoshe walo mnyango (uNkk Sithole-Moloi) ngoxhaso esilutholile. Kangazi ukuthi ngingathini ngempela kulo mnyango ngoba kawugcinanga ngokusixhasa, usitholele nosomabhizinisi osemnkantshubomvu ebhizinisini lezinkukhu zamaqanda ukuba asicathulise,” kusho uNkk Makhathini.
Uthi amaqanda abazowakhiqiza bazowathumela ezitolo ezinkulukazi ngokusizwa nguyena lo somabhizinisi osemnkantshubomvu, onguMnu Seo Mthethwa weNu Dawn Eggs.
Utshele ILANGA ukuthi babona leli bhizinisi labo lincintisana namanye amakhulu enza lo msebenzi. UMnu Mthethwa uthi kumjabulise kakhulu ukucelwa ukuba alekelele laba besifazane ngoba kukhona abantu abazosizakala ngolwazi azobanika lona.
“Sesibadala thina, kufanele sithi sidlula emhlabeni, kube sekukhona abanye esibanike ulwazi ukuze nabo balwedlulisele kwabanye. Mina ngingusomabhizinisi wesibili eNingizimu Afrika okhiqiza amaqanda awu-500 000 ngosuku, owokuqala useMpumalanga.
“Akufanele kugcine ngathi, nabanye kumele bafike kuleli zinga lethu. Ngize lapha nje, ngizothi ngisebenziseni ukuze kwande isibalo sabakhiqizi bamaqanda,” kusho uMnu Mthethwa.
UMnu Willies Mchunu ongusihlalo omusha we-Agri Development Agency elekelela abalimi abamnyama abasafufusa, ikakhulukazi ezinhlelweni zoguquko lokwabiwa komhlaba uncome kakhulu uMnu Mthethwa ngokungabi nomona, walekelela amaTshitshi oQobo ngolwazi.
UNkk Sithole-Moloi uthe ngeke bagcine ngalolu xhaso, kodwa bazoqhubeka balekelele amaTshitshi oQobo aze akwazi ukuzimela.
“Okusijabulisayo wukuthi sixhase abesifazane abaphokophele ukuya phambili, abakulambele ukuphumelela. Umhlaba wabo mkhulu kakhulu, ekuhambeni kwesikhathi leli bhizinisi kumele likhule kakhulu nabo bagcine sebekhiqiza amaqanda awu-500 000 ngosuku,” kusho uNkk Sithole-Moloi.
Previous articleIPirates engcupheni yokuntula umqeqeshi
Next articleOwoKhozi FM ukhuthaza ukuqhakaza kwembokodo